Britain oo ka digtay weerarro ka dhaca Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Britain oo ka digtay weerarro ka dhaca Jabuuti
Jabuuti – Mareeg.com: Dowladda Britain ayaa ka digtay weeraro Alshabaab qorsheynayaan iney ka geystaan Jamhuuriyadda Jabuuti, halkaasoo bishii hore Alshabaab ka fuliyeen labo qarax.
Britain ayaa sheegtay in Al-shabaab ay wado qorshe ay weerarro kaga geysanayso dalka Jabuuti, sida goobaha reer galbeedku ku leeyihiin Jabuuti.
Warbixin kazoo baxday xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka Britain ayaa lagu sheegay iney jiraan warar lagu kalsoon yahay oo muujinaya in Al-shabaab ay doonayso in ay weerarro ka geysato bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaalla dalka Jabuuti, kuwaasoo ay ku jiraan goobaha ay ku sugan yihiin dadka reer galbeedka ah.
Warbixinta Britain ayaa lagu sheegay in sababaha keenaya in Jabuuti iyo danaha reer galbeedka ee dalkaas ku yaalla ay Al-shabaab beegsato ay yihiin kaalinta ay Jabuuti ku leedahay howlgalka AMISOM iyo sidoo kale marti-gelinta saldhigyada dalalka reer galbeedku ay ku leeyihiin Jabuuti.
Warka ay soo saartay dowladda Britain ayaa imaanaya iyadoo ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ay isku diyaarinayaan sidii ay u xoojin lahaayeen howlgallad ay kawadaan Soomaaliya si ay Al-shabaab deegaannada ay ku sugan yihiin uga qabsan lahaayeen.
Digniintan ayaa imaanaysa iyadoo toddobaadkan Britain ay muwaadiniinteeda ku sugan dalalka Bariga Afrika sida Itoobiya, Kenya, Jabuuti iyo Uganda ay ka digtoonaadaan inay tagaan meelaha ay dadweynuhu ku daawanayaan ciyaaraha.
Waxaa horay digniin nuucaan ah usoo saaray dowladda Mareykanka, waxaana digniinahan imaanayaan xilli Alshabaab bishii hore weeraro ismiidaamin ah ku qaadeen baar ay ku badnaayeen ajaanib reer galbeed ah caasimadda Jabuuti.
Puntland oo ka dacwootay Somaliland